पूर्वपश्चिम राजमार्गमा गाडीले ठोक्किँदा भाँचिने कस्ता पुल ?
काठमाडौं – पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको अरुण खोलामा रहेको पुललाई मंगलवार राति ट्रकले ठक्कर दिँदा पुल भाँचियो । पुल भाँचिएपछि यातायात सञ्चालानमा अवरोध आयो ।
अवरोध हटाउनका लागि प्रहरीले बुधवार बिहान सवारीसाधन वैकल्पिक बाटोमा पठायो । अरुण खोला पुलदेखि १ किलोमिटर उत्तरतर्फ करमघारी गाउँबाट खोलामा वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
मंगलवार राति राजमार्गको पुल ट्रकको ठक्करबाट भाँचिएर यातायात नै अवरुद्ध हुनु प्रतिनिधिमूलक घटना हो । गाडीको ठक्करबाट यातायातमा अवरोध आउने गरी पुल भाँचिएका अरु घटना पनि छन् ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार सवारीसाधनको ठक्करबाटै यातायात अवरुद्ध हुने गरी यसअघि ४ पुल भाँचिएका छन् । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा पहिले २०५८ सालमा नवपरासीकै पत्थर खोलामा रहेको पुल भाँचिएको उनले बताए । पत्थर खोलासहित बौलाहा खोला, जयश्री खोला र नौगाड खोलामा समेत यसअघि सवारीसाधनको ठक्करले पुल भाँचिएका शर्माले बताए ।
कसरी भाँचिन्छन् पुल ?
स्टिल प्रयोग गरिएका पुल एक ठाउँमा धक्का लागेमा कुच्चिने र सवारीसाधन चलाउन नमिल्ने गरी क्षति हुने सडक विभागका महानिर्देशक शर्माले बताए । ‘यो के हुन्छ भने स्टिल ट्रस ब्रीजको एउटा मेम्बरमा धक्का लाग्यो भने त्यो कुच्चिन्छ,’ उनले भने, ‘अनि कंक्रिटहरू क्र्याक हुन्छन् ।’
कति हुन्छ स्टिल पुलको आयु ?
सडक विभागका अनुसार स्टिल पुलको आयु ४० देखि ५० वर्षको हुन्छ । ‘स्टिल ट्रस एण्ड आरसीसी डेस्क’ (कम्पोजिट) पुलले सामान्यतया ४० वर्ष काम गर्ने र दुर्घटना भएको घटनामा त्योभन्दा अघि नै पनि ड्यामेज हुन सक्ने सडक विभागका महानिर्देशक शर्माले बताए ।
‘सामान्यतया मान्छे ७५ वर्ष बाँच्छ भनौं न ! कोही–कोही चाहिँ हाइपोटेन्सन, यताउति भयो भने ६ वर्षमै मर्छ । कोही २० वर्षमा मर्छ हर्ट अट्याक भयो भने । यस्तै हो यो पनि,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘यो किसिमका पुल पनि सामान्यता ४० वर्षजति काम गर्छ तर यो चाहिँ एक्सिडेन्टल केश हो ।’
कति छन् यस्ता पुल ?
पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा मात्रै साना–ठूला गरी करीब १ सय वटा पुल छन् । त्यसमा स्टिल पुलको संख्या ११ वटा छ । विभागका अनुसार अरुण खोला पुल, जयश्री खोला पुल, बेल्दिया ब्रीज, मुकुन्दे ब्रीज, बौलाहा खोला पुल, लाकाहा खोला पुल, पत्थर खोला पुल लगायतका पुल स्टिलबाट निर्माण गरिएका छन् । गिर्वारी ब्रीज, बिनाइ खोला पुल, भलुही खोला पुल र भुमही पुल पनि स्टिल पुल नै हुन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको निर्माण कार्य सन् १९७२ मा सम्पन्न भएको थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणकै समयमा पुलको समेत निर्माण गरिएको सडक विभागका सहायक सूचना अधिकारी अर्जुन सुवालले बताए । ‘कुन पुल कहिले बन्यो अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणकै समयमा पुलहरू पनि निर्माण गरिएका हुन् ।’
स्टिलले बनेका पुलले ४० वर्ष काम गर्ने महानिर्देशक शर्माको भनाईलाई आधार मान्दा राजमार्गमा रहेका स्टिल पुलको म्याद समाप्त भइसकेको छ । यद्यपि सडक निर्माणपछि १ पटक स्तरोन्नतिको काम समेत भएको सडक विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा रहेका करीब १ सय वटा पुलमध्ये अन्य पुल आरसीसी कंक्रिटले बनेका छन् ।
कहिले मर्मत हुन्छ अरुण खोला पुल ?
मंगलवार राति ट्रकको ठक्करबाट क्षति पुगेको अरुण खोला पुल मर्मतका लागि अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको सडक विभागका अधिकारीले बताएका छन् । विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बुधवार अनुमगन टोली गएको र टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पुल मर्मतबारे भन्न सकिने बताए । ‘इन्जिनियर सा’पहरूको टोली गएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले अध्ययन गरेर यसो–यसो गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रतिवेदन दिनुहुन्छ र त्यसको आधारमा काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले फलामका रड भएको गाडीले स्टिल पुललाई ठक्कर दिँदा भाँचिनु कुनै अनौठो नभएको भन्दै अनुगमन टोलीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मर्मतबारे भन्न सकिने बताए । प्रवक्ता सापकोटाले पुलको गुणस्तरबारे आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ नभएको दाबी गरे ।